16 sano jir Soomaali ah oo wacdaro ka dhigtay Norway - BBC News Somali
16 sano jir Soomaali ah oo wacdaro ka dhigtay Norway
13 Maajo 2019
Shaqada Garsooranimada ama Albiitaraha ayaa ah shaqo aad u adag, Sumaya Shidane waa gabar soomaaliyeed oo 16 jir ah kuna nool Magaalada Ovrhalla ee gobolka Trøndelag. Waxay kamid tahay garsoorayaasha ciyaarta kubada cagta kooxaha dhalinyarada ee dalka Norway.
''Waxa igu dhaliyay walaalo badan ayaan leeyahay oo aad u jecel daawashada kubada cagta,waqti aan wada fiirsanaynay ciyaaraha champions league iyo premier league aan taageero kooxaha Barcelona iyo liverpool, markii dambe waxan iska fiirin jiray nimanka Albiitaraha ah sida ay firinbiga u foorinayaan sida ay u farsamaynayaan,ka dib waan raadiyay in ay gabdho leeyiihiin oo shaqadaas qaban karaan, maadaama an helay jaaniskan waan ka qeyb galay,go'aan kadib waxan qaatay koorso''sidaas waxaa BBC-da u sheegtay Sumaya.
Sumaya waxay ka soo muuqatay warbaahinta iyada oo xijaaban oo ku guda jirta shaqadii Garsooranimada oo markii u horeysay ay qabatay sanadkii 2018, waa shaqo adag oo u baahan firfircooni iyo faajignaan, Sumaya waxa u fududeeyay in ay orad ku dhamaysato garsoorka ciyaarta, hore ayay uga tirsanayd Atleticada oradka iyo boodada ciyaaraha kala duwan.
Gabadh Soomaali ah oo lagu takooray ku hadalka luuqaddeeda hooyo
Gabadh Soomaali ah oo doorasho kaga guuleysatay ganacsade caaan ah
Shilkii Diyaarada Itoobiya : Imisa ayaa Soomaali ah?
Caqabadaha ay la kulan tay Sumaya
Gabdhaha xijaaban ayaa kala kulma goobaha shaqada ee wadamada galbeedka cunsirinimo la xariirta muuqaalka iyo labiska.
''Markii ugu horeysay waxan ka bilaabay kooxaha 11 jirada,12 jirada hadana waxay u qabataa 14 jirada gabdhaha iyo wiilsha,intii aan ku dhex jiray shaqadan in kasta oo ay jiraan dad is cuncunaya oo qaylinaya oo xanaaqsan way jiraan, haddana waxaan la kulmay gabar igu tilmaantay cunsiri''
Gabdhaha Soomaalida inta badan kuma dhiiradaan in ay ka qayb galaan ciyaaraha kala duwan, fursadahan waxa inta badan hela wiilasha.
''Hooyaday illaahay kheyr ha siiyo fikradaha iyo rayiga wanaagsan way nagu taageertaa,hadii wax xun uu yahay way naga celisaa,Aabana ma noolo wuu dhintay,Hooyo markii aan u sheegay in aan jecelahay hawashan oo ay jiraan gabdho qabta shaqadan sida gabar soomaali ah oo xijaaban oo Ingiriiska garsoore ka ah kadib way iga ogolaatay in aan shaqadan qabto''
Dalka soomaaliya fursadaha ay gabdhuhu helaan aad ayay u yaryihiin marka loo eego fursadaha ay helaan soomaalida qurbaha ku nool.
Waxaa soo badanaya gabdhaha fursadaha naadirka ku ah soomaaliya ka helaya qurbaha, waxa hore warbaahinta uga soo muuqatay gabar soomaaliyeed Jawaahir Rooble oo kulamada kooxaha dalkaasi UK dhexdhexaadisa.